dayniile » Sarkaal Shabaab ka tirsanaa oo isku dhiibay Ciidanka Dowladda
Sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab ayaa isku dhiibay Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan Taliska Qeybt0-aad ee xoogga dalka, wuxuuna sarkaalkan qaabilsanaa sameynta Miinooyinka iyo qaraxyada waa weyn.
Saraalkan iksu dhiibay Ciidanka Dowladda ayaa waxaa lagu magacaabaa Caddow Macalin Isxaaq, wuxuuna Shabaab uga howlgali jiray gobolada Jubbada Hoose, Baay, Bakool, Gedo, Banaadir iyo deegaano ka mid ah gobolada dhexe ee dalka.
Caddow Macalin Isxaaq ayaa sheegay in isaga iyo dhalinyaro kale oo ka bar bar dagaalamaysey Al-shabaab si gaar ah ay u taabatay weerarkii 14-October ee Isgoyska Zoobe, taasina ay keentay in dhalinyaro badan ay go’aansadaan in ay isaga soo baxaan Shabaab.
“Waxaan marqaati ka soo noqday in ay been abuur tahay in Al-shabaab ay diin u dagaalamayaan, si arxan daro ah ayey u laayaan dadka Soomaaliyeed, taas ayaana garanay aniga iyo dhalinyaro kale oo hadda isku dayaya iney isaga soo tagaan.” Ayuu yiri Caddow Macalin Isxaaq.
Abaanduulaha Qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Ismaaciil Khaliif Shire ayaa dhalinyarada Shabaab ka tirsan ugu baaqay in ay Dowladda isku soo dhiibaan, waxaana uu balan qaadey in si wanaagsan loo soo dhaweyn doono.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer sheegay in dowladdu ay cafis u fidinayso dhalinyarada ay ka tirsan ururka Al-shabaab, haddii ay isku soo dhiibaan Dowladda.